कोभिडले मलेरियाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढायो ! - jagritikhabar.com
कोभिडले मलेरियाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढायो !
जेनेभाः कोरोना भाइरस महामारीले मलेरियाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ। अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा सन् २०२० यता मलेरियाबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा वृद्धि भएको हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)का अनुसार सन् २०२० मा विश्व कोरोना महामारी सुरु भएयता विश्वभर मलेरियाबाट मर्नेहरुको संख्या ६ लाख २७ हजार नाघेको छ। मलेरियाबाट मृत्यु हुनेमा अधिकांश बालबालिका र अफ्रिकाका गरिब मुलुकहरुका मानिस रहेको डब्ल्युएचओले जनाएको छ।
डब्ल्युएचओका अनुसार सन् २०१९ मा मलेरियाबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या ५ लाख ५८ हजार थियो। विश्वमा कोरोना महामारी फैलिएपछि सो संख्या दुई तिहाइले बढेको छ। सन् २०१९ सम्मको तुलनामा अफ्रिकामा मात्र मलेरियाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १२ प्रतिशतले बढेको बताइएको छ। डब्ल्युएचओले मलेरियाका कारण मृत्यु भएकाहरुको सो तथ्यांकलाई पछिल्लो समयको खराब तथ्यांक बताएको छ।
जापानका प्रधानमन्त्रीले सैन्य क्षमता बढाउँदै
टोक्योः जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले देशको प्रतिक्षाका लागि सैन्य क्षमता बढाउने प्रतिज्ञा गरेका छन्। चीन र उत्तर कोरियासँग अनपेक्षित खतरा रहेको भन्दै उनले देशको रक्षा क्षमता बढाउने प्रतिज्ञा गरेका हुन्।
‘जापानका जनताको जीवन र जीविकोपार्जनको रक्षाका निम्ति हामीले दुस्मनविरुद्ध आक्रमण गर्ने क्षमतासहितका हातहतियार र उपकरण, हाम्रो प्रतिरक्षा क्षमताको लागि सैनिकको क्षमता बढाउने छौं,’ स्थानीय मिडियासमक्ष उनले भनेका छन्।
दोस्रो विश्व युद्धपछिको शान्तिवादी संविधानले रक्षा र सैन्य क्षमता वृद्धि गराउनमा रोक लगाएको थियो। जापानको रक्षा क्षमता बढाउन अमेरिकाले सघाउन सक्ने र प्रधानमन्त्रीको सो उद्घोषले जापानको सैन्य आकारमा परिवर्तन ल्याउनसक्ने बताइएको छ।
देशमा रक्षा र सैन्य क्षमता बढाउन जापान सरकारले तीनवटा मुख्य राष्ट्रिय रक्षा नीतिमा भर पर्ने र फेरबदल ल्याउन एक वर्षभित्रमै गृहकार्य गर्नुपर्ने किशिदाले बताएका छन्।
सुकीलाई जेल सजाय सुनाएपछि म्यानमारका विदेशी मन्त्री कम्बोडियाको भ्रमणमा
फनोमपेनाहः म्यानमार सेनाले नियुक्त गरेका म्यानमारका विदेशमन्त्री कम्बोडियाको भ्रमणमा रहेका छन्। म्यानमारकी पूर्व नेतृ आङ साङ सुकीलाई चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको भोलिपल्ट विदेशमन्त्री वुन्ना मौङ विन मंगलबार कम्बोडियाको भ्रमणमा रहेका हुन्।
विदेशमन्त्री विनले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग राजधानी फनोम पेनाहस्थित पिस प्यालेसमा भेटवार्ता गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा खबर छ। दुवै नेताबीच दुई पक्षीय सम्बन्धमा र आसियानको मुद्दाबारे छलफल भएको बताइएको छ।
गत महिना आयोजित दक्षिण-पूर्वी एसियाली मुलुकको संगठन आसियानको शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरुले भाग लिएका थिए। सैन्य ‘कू’ लागू गरेपछि आसियानका सदस्यहरु म्यानमारसँग रुष्ट बनेका थिए। म्यानमारलाई निम्तो नदिइएको सो सम्मेलनमा कम्बोडियाले भने उपस्थिति जनाएको थियो।
लागोसको कारमा ८ बालबालिका मृत फेला
आबुजाः अफ्रिकी मुलुक नाइजेरियाको मुख्य सहर लागोसमा ८ बालबालिका मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। लागोसस्थित बन्द कारभित्र ४ देखि ६ उमेर समूहका ८ बालबालिका मृत फेला परेका हुन्।
प्रहरीले सो घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको र मृत्युको कारण पत्ता लगाउन ल्याब परीक्षण गरिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ती बालबालिका शनिबार मृत भेटिएको आइतबार प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ।
मृतक बालबालिका दुईवटा परिवारका सदस्य हुन्। मृतकको परिवार नाइजेरियाको नागरिक भएको र सो परिवार लागोसमा बस्दै आएको बताइएको छ।
इन्डोनसियाको ज्वालामुखीमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुग्यो
जर्काताः इन्डोनेसियाको ज्वालामुखीमा परी मृत्यु हुनेहरुको संख्या ३४ पुगेको छ। शनिबार विस्फोट भएको ज्वालामुखीमा परी मंगलबारसम्म मृत्यु हुनेहरुको संख्या ३४ पुगेको हो।
ज्वामुखीको लागि जोखिमपूर्ण मानिने इन्डोनेसियामा शनिबार ज्वालामुखी विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा परी पहिलो दिन १३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १६९ अन्य गम्भीर घाइते भएका थिए। विस्फोटसँगै निस्केको खरानी र लेदोसहितको लाभामा परी २७ भन्दा बढी हराइरहेका थिए। हराएकामध्ये १७ जनाको खोजी जारी रहेको र अन्यको शव भेटिएको त्यहाँको विपद् विभागले जनाएको छ।
ज्वालामुखीका कारण ३ हजारभन्दा बढी घरहरु पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ३ हजार ७ सय मानिस विस्थापित भएका छन्।
हैटीमा अपहरणमा परेका तीन जना धर्म प्रचारक मुक्त
पोर्ट औ प्रिन्सः हैटीमा अपहरण परेका तीन जना क्रिष्चियन धर्म प्रचारक मुक्त भएका छन्। क्रिष्चियन धर्म प्रचार गर्दै हिँडेका उत्तर अमेरिकी नागरिकहरु हैटीमा अपहरणमा परेको झन्डै तीन महिनापछि मुक्त भएका हुन्।
गत अक्टोबरमा धर्म प्रचार गर्दै हिँडेका १ क्यानडेली र अन्य १६ उत्तर अमेरिकी नागरिकहरु हैटीमा बन्धकमा परेका थिए। हैटीको राजधानी पोर्टऔ प्रिन्सको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने एक अनाथाश्रमबाट फर्किँदै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई हैटीको खतरनाक अपराधिक समूहले अपहरण गरी बन्धक बनाएर राखेको थियो।
बन्धकमा परेकामध्ये दुई जनालाई सो समूहले नोभेम्बरमा छुटाएको थियो। बाँकी १२ जना अझै बन्धकमा रहेको चर्च समूहले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासँग बताएको छ।